Gbasara Anyị | Okporo ụzọ ka Mgbakwunye
Nnọọ! Y’oburu n’inweta azụmahịa na intaneti, obu ihe diri gi ka ichere maka iche okporo ụzọ. A sị ka e kwuwe, ịkwesịrị ịkwado n'igwe ọchụchọ maka azụmaahịa gị ka ọha na eze na-ahụ gị. Agbanyeghị, ogo dị na-agbanwe kwa nkeji oge ọ bụla ma nke ahụ dabere na okporo ụzọ chụpụrụ gị website.
Niile echiche na-akpọ ebe a bụ na ị ga-adọta ndị mmadụ ileta gị website. Nzaghachi ha ga-enye ga-abụ ohere iji nweta ndị ọbịa karịa. N'ihi ya, nke ahụ pụtara ihe ọzọ okporo ụzọ maka ntanetị gị n'ịntanetị.
E nwere ụzọ dị iche iche otu ị ga - esi nwee ike lekwasịrị okporo ụzọ gị website. Otu n'ime ha bụ ahịa ahịa, na-eme ka ndokwa nke mkpado HTML na peeji gị, wee na-ekwu okwu na blọọgụ nke ndị ọzọ. Maka nkọwa ọzọ, gụọ posts na saịtị anyị!.